Kenya: Wasiirkii Gudaha oo Xilkii laga Qaaday
Wasiirkii arrimaha gudaha ee dalka Kenya Joseph Ole Lenku ayaa xilkii laga qaaday, sidoo kalena waxaa is casilay taliyihii ciidamada booliska ee Kenya David Kimaiyo.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isla maanta xilka wasaaradda arrimaha gudaha u magacaabay Major General Joseph Nkaissery ooh ore uga tirsanaa ciidamada Kenya haatanna hawlgab ahaa.
Madaxweynaha Kenya ayaa la hadlay shacabka dalkaasi, tallaabooyinka ayaa ku soo beegmaya iyada Maliishiyaadka kooxda Al Shabab ee dalka Somalia ayaa sheegteen mas’uuliyadda dilka 36 qof oo maanta ka dhacay waqooyiga bari ee Kenya.
Hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa aad u cambaareeyay maamulka madaxweyne Kenyatta waxaana uu ku hanjabay inay qaadi doonaan tallaabooyin aan la shaacin oo ka dhan ah xukuumdda talada haysa.
Weerarka al shabaab ayaa ka dhacay goob dhagaxa laga qodo oo ku dhow magaalada Mandera, halkaas oo dad goobjoogeyaal ah ay sheegeen in dableyda ay shaqaalahaasi ku weerareen teendhooyinkooda oo ay xiligaasi hurdayeen.
Warbixinnada Weerarka Mandera halkan ka dhegeysi:
Mandera Attack Org